Maxaa ku dhacay kaantarooladii Garowe iyo Gaalkacayo? | allsanaag
Maxaa ku dhacay kaantarooladii Garowe iyo Gaalkacayo?
Kaantaroolka Bosaaso oo qura miyaa ka shaqeeya Puntland ?
Gawaarida sida alshabaabka ee ka timaada koonfurta Soomaaliya , kuwa lagu soo qariyo bambooyinka wax dila, kuwa sida lacagta faalsada ah, kuwa lagu soo daabulo dadka tahriibaya, dhamaantoo waxa lagu qabtaa Kaantaroolka Koonfureed ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari . Gawaarida lagu qabto Boosaso ayaa waxay soo dhaafaan dhamaan Kaantaroolada degmooyinka hoos yimaada Gobolada Mudug, Nugaal iyo Karkaar .
Hadaba su’aasha is waydiinta mudan ayaa waxay tahay waa maxay sababta dawladda Puntland ay mushahaarka ugu bixsaa Kaantarooladan haba yaraatee aan shaqadooda ka soo bixin iyo ilaalinta bulshada reer Puntland ee duulaanka lagu yahay.
Sidoo kale maamulka Puntland ayaa ka gaabiyey inuu abaal marin, dalacsiin iyo gunaba siiyo madaxda iyo shaqaalaha Kaantaroolka magaalada Boosaaso oo ah halka qura oo sida daacada ah looga shaqeeyo maamulka Puntland.
Ugu danbayntii mar haddii alshabaabka ka yimaada Koonfurta Soomaaliya ee u socda inay reer Puntland dilaan ay musuqmaasaq iyo laaluush ku soo dhaafayaaan kantaroolada magaalooyinka Galkacayo,Burtinle, Garowe iyo Qardho oo ay dawladda Puntland lacag ku bixiso shaqaalahooda , ayna la mid noqdeen gobolada Sool iyo Sanaag oo aan Kantroolo lahayn oo si sahlan alshabaab iyo SNM uga soo gudbaan. Soo lama gaarin xilligii la xiri lahaa kantaroolada magac u yaalka ah oo aan shaqayn, lana xoojin lahaa kanatroolka shaqaynaya ee howshiisa qaran gudanaya ee ku yaal magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso
← Dadka aan Nabadda Deeqin HAG iyo qabyaaladooda →